आज भदौ ११ गते बिहीबारको राशिफल हेरेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्
[ January 15, 2022 ] माघ १ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल राशिफल
[ January 14, 2022 ] प्रेममा पागल दाजु बहिनीले गरे सबै सीमा तोडेर बिहे, विवाह अघि नै गर्भवती समाचार
[ January 14, 2022 ] पुस ३० गते शुक्रबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल समाचार
Homeराशिफलआज भदौ ११ गते बिहीबारको राशिफल हेरेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्
August 27, 2020 admin राशिफल 6311
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) सवारी सा’धनको प्रयोग गर्दा वा चलाउँदा ध्यान दिनुहोला अप्रिय घटना नघट्ला भन्न सकिन्न । दिनभर व्यास्त भएपनि न्यून पारिश्रमिकमा चित्त बुझाउँनु पर्दा मन खिन्न हुनेछ । खानपिन तथा बाहिरि बाता’बरणको ख्या’ल गर्नुहोला । पढाई लेखाईमा समय दिन नसक्दा अरुभन्दा पछि परिने चिन्ताले सताउँनेछ । व्यापार व्यावसायमा समय दिन नसक्दा घाटा लाग्ने योग रहेको छ भने आम्दानिका स्रोतहरु साघुरिने छन् । साझपख सम’य राम्रो रहेकोले माया प्रेममा नजिक हुन सकिनेछ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) व्यावसा’यिक यात्रा हुने भए खर्चिलो हुनेछ । मा’या प्रेम तथा जीवन साथि सँग आत्मियताको कमि हुनेछ भने एक्लो पनको’) महशुष हुनेछ । साझेदारि व्यावसायमा अबिश्वास सिर्जना हुनेछ भने आजको दिन व्यावसायमा लगानि नग’र्नुनै राम्रो रहेकोछ । पढाई ले’खाईमा थोरै बढि समय खर्चिय भनेजस्तो नतिजा हात पार्न सकिनेछ । बिलाशि बस्तुको प्रयोग गर्न पाईने योग रहेकोछ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) व्यापार व्याव’सायमा लगानि बढाएर प्रसस्त रुपैया पैसा कमाउन सकिनेछ । माया प्रेममा सामिप्यता बढ्ने तथा दाम्पत्य जी’वनको गाठो अझ मजबुत भएर जानेछ । मावलि पक्षबाट भने’जस्तो सहयोग प्राप्त हुनेछ । लामो दुरिको अफिसियल यात्राको अधिक सम्भावना रहे’कोछ भने यात्राबाट भनेजस्तो उपलब्धि हात पर्ने ग्रहयोग रहेकोछ । वादबिवाद तथा मुद्दा मामिला’मा प्रतिश्पर्धिहरुलाई हराउदै जित निकाल्न सकिनेछ । पढाइ लेखाइमा मन जाने हुनाले अरुभन्दा अग्र स्थानमा तपाईको नाम रहेनेछ ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) आ’फ्नो ज्ञानला’ई सहि समयमा प्रयोग गर्न सकिने हुदा चुनौति पन्छाएर काम बनाउन सकिनेछ । बौद्धिकताको प्रतिष्पर्धामा तपाईकै जित हुनेछ भने भनेजस्तो पारिश्रमिक पाउदा मन प्रफु’ल्लित हुनेछ । मन परेको मानिस’बाट उपाहार तथा भौतिक सम्पति पाउने योग रहेकोछ । बैक तथा बित्तिय क्षेत्रसँग पेशाबाट भनेजस्तो लाभ लिन सकिनेछ । सन्तान त’था छोराछोरीको सहयोगले राम्रा काम गर्न सकिनेछ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) घरायसी स’मस्या एक्कासि बढ्नाले अर्थ अभाव हुनेछ । आमा तथा आमा सँग टाडिएर यात्राको तय गर्नुपर्दा मन खिन्न हुनेछ भने आफन्तको साथ पाईने छैन । कृषि तथा सहकारि व्यावासायमा भने मनग्गे आम्दानि हुने यो’ग रहेकोछ । समाजसेवामा तथा राजनितिमा पदको दुरुप’योग गर्दा मान सम्मानमा दाग लाग्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । साझबाट समय राम्रो रहेकोले अध्ययनमा मन जाने तथा नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो ) माया प्रेममा सामि’प्यता बढेर जाने तथा मिल्ने साथिको सहयोगले कामहरु बन्नेछन्् । रोकिएर बसेका कामहरु बन्नुको साथै बिस्तारै नयाँ काम बन्नेछन् । पढाई लेखाईमा सुधार गर्दै सफलताको नजिक पुग्न सकिनेछ । छिमेकिहरु माझ राम्रो कामगरि प्रशिद्धि कमाउँन सकिनेछ । समाजिक सम्बन्धहरु सुदृड भएर जानेछन् भने दाजुभाई तथा बन्धुबान्धबको सहयोग पाईने हुनाले जोसिलो काम गर्ने जागर आउनेछ । साझबाट समय मध्ययम रहेकोले आफन्तसँग मनमुटाब बढ्ने योग रहेकोछ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) कुटुम्बसँगको सम्ब’न्धमा सुमधुरता आउँनेछ । आफन्तबाट भनेज’स्तो सहायोग पाईने हुँदा काम गर्न सहज हुनेछ । खोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा खर्चि’यको समयबाट सकारात्मक नति’जा आउँने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ भने अध्य’न तथा अध्यापनको क्षेत्रमा अरुभन्दा अगाडि बढि नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सकिनेछ । पछि सम्म आम्दानि हुने व्यावसायमा लगानि बढा’उन सकिनेछ ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) समय’मा काम नबन्ने हुदा मनमा निरासा पैदा हुनेछ । व्यावसायमा लगानि गरेपनि आम्दानि थोरै हुने हुदा दैनिक गुजारा गर्न गा’ह्रो हुनेछ । माया प्रेममा अबि’श्वास सिर्जना हुने तथा परिवारमा झै झगडा हुने सम्भावना अधिक रहेको छ । सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि सामान्य समस्याले सता’उनेछ । अवस’रहरुको सदुपयोग गर्न नसक्दा बिभिन्न फाई’दा जनक कामहरु अरुकै पोल्टोमा पर्नेछ । साभपख सम’य राम्रो भएकोले नया प्रकृतिको काम गरि मनग्ने लाभ लिन सकिनेछ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) न्यून पारिश्रमि’कमा दिनभर समय ब्यातित गर्नुपर्दा अन्य काममा समय दिन सकिने छैन । लामो दुरिको बैदेशि’क यात्राको तय हुनेछ भने बिदेशि सामा’नको व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । का’म गर्दा साबधानि अपनाउँनुहोला खराब ब्याक्तिको बिश्वास गर्नाले जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । सा’झबाट समय राम्रो रहेकोले अध्ययनमा मन जाने तथा भने’जस्तो सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ । राजनीति तथा सामाजिक काम गर्र्नेहरुका लागि स’मय उत्तम रहेकोछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) माया प्रेममा सामिप्यता बढ्ने त’था पति पत्निबिचको सम्बन्ध’मा सुधार भएर जानेछ । दाजुभाईले तपाईको काममा आ’र्थिक सहयोग गर्ने हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ । ईच्छा तथा मनोका’मनाहरु पुरा हुनेछन् । दिगो काम गरि आम्दानिका स्रोत बढाउन सकिनेछ । व्यापार व्यावसायमा लगानि गरि मनग्गे आम्दानी गर्न सकिनेछ भने आम्दानिका स्रोतहरु फरा’किला हुनेछन् । साँझपख आफन्तसँग टाडिएर लामो दुरिको यात्राको तय गर्न सकिनेछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा प्रतिष्पर्धिहरुलाई किनारा लगाउदै तपाईकै नाम अग्र स्थानमा आउँनेछ । व्यापार व्याव’सायमा भने जस्तो नाँफा कमा’उँन सकिनेछ भने थप लगानि बढाउँने बाताबण बन्नेछ । छोटो समयमा नाम तथा दाम कमाउँन सकिने हुँदा घर परिवारमा खु’सियालि छाउनेछ । मा’या प्रेममा सामिप्यता बढे’र जाने तथा पति पत्निबिच बिश्वास बढेर जानेछ । नयाँ नयाँ कामको प्रस्ताव आउँनेछ भने नोकरिमा पदोन्नति हुनेछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) आक’स्मिक धन सम्पति प्राप्त हुनेछ भने नसोचेको धन तथा सम्पति हात लाग्ने योग रहेकोछ । समस्याहरुको सजिलै समाधान गरि उपलब्धी मु’लक कामहरु गर्न सकिनेछ । अध्य’यन अनुशन्धानमा सोचेभन्दा राम्रो प्रगति हुन तथा नयाँ कुरा पत्ता लगाउन सकिनेछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने बैक तथा बित्तिय क्षेत्रमा गरिएको लगानि बाट भने’जस्तो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । माया प्रेममा सामान्य मनमुटाव सिर्जना भएपनि अन्तत एका अर्कालाई बिश्वास गर्दै छुटिदा मन प्रशन्न हुनेछ ।
भोली भदौ ११ गते बिहिबारको राशिफल हेर्नुहोस्
वर्षौ पुरानो ग्यास्टिक पनि तुरुन्तै निको पार्ने यस्तो छ घरेलु ओेैषधी [हेर्नुहोस् भिडियो]
भोलि भदौ १ गते सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस्…
August 16, 2020 admin राशिफल 13337
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) आफ्नो प्रिय पात्रलाई आफ्नै वरिपरि देख्न पाउदा मन प्रशन्न रहनेछ । विवा’दित विषयहरुको नतिजा तपाईँ आफ्नै पक्षमा आउने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । अर्थ उपार्जनका विभिन्न स्रोतहरु जुट्ने हुनाले प’छिसम्म आम्दानी हुने व्यवसायमा
असोज १४ गते बुधवार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
September 30, 2020 admin राशिफल 6765
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) गरि’रहेको काममा त्यती मन नला’ग्नाने सामान्य अप्ज’स आईपर्ने छ । ब्यापार ब्यब’सायमा राम्रो समय रहेको छ । खानपा’नको कारणले स्वास्थ सम्ब’न्धि समस्या उत्पन्न हुन
जेष्ठ २५ गते मंगलबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हे’र्नुहोस राशिफल
June 8, 2021 admin राशिफल 2436
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र साहश’को कमि आउनेछ । भौतिक स्रोत साधनको प्रयो’गमा समय ब्यतित हुने योग रहेको छ । मध्यान पश्चात ब्यक्तिव
माघ १ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
प्रेममा पागल दाजु बहिनीले गरे सबै सीमा तोडेर बिहे, विवाह अघि नै गर्भवती
पुस ३० गते शुक्रबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (227463)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (220383)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (220144)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (217345)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (216358)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (215053)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (213760)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (213703)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (195576)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (182161)